> Resource> Nyefee> otú nyefee faịlụ ka Galaxy S3 si PC
Na nso nso ịzụta Samsung Galaxy S3, na ike na o siri ike na-eche nyefee faịlụ site na PC na ya? Iji mee ka obere ọrụ nke Galaxy S3 faịlụ transfer, i nwere ike a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ nyere gị aka. Gbalịa a - Wondershare MobileGo for Android (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Nke a ọkachamara Android njikwa-enyere gị aka nyefee ngwa, kọntaktị, music, videos na foto site na PC na-Samsung Galaxy S3 mfe na conveniently. Ọ bụrụ na ị nwere SMS mbipụta si Galaxy S3 ma ọ bụ ndị ọzọ gam akporo igwe site na iji MobileGo for Android, ugbu a, na ị na enwe ike inwe SMS azụ Galaxy S3.
Download a usoro nyefee faịlụ ka Galaxy S3.
Cheta na: Na MobileGo for Android (n'ihi na Windows ọrụ), ị nwere ike nyefee niile faịlụ kwuru na akụkụ n'okpuru. Ezie na Mac version - MobileGo for Android Pro (Mac) nwere ole na ole ókè. The Mac version anaghị akwado converting kedi ọdịyo na video ka Android kachasị n'anya. Ọ na-adịghị ekwe ka ị na-akpali kọntaktị site na Outlook, Windows Live Mail na Windows Address Book.
Otú nyefee faịlụ site na PC na-Samsung Galaxy S3
The nduzi n'okpuru bụ banyere otú nyefee faịlụ site na PC na-Galaxy S3 na Wondershare MobileGo for Android, windo mbipute a usoro. Mac ọrụ nwere ike na-yiri ndu mgbe eji Wondeshare MobileGo maka Andoid Pro (Mac).
Cheta na: N'ezie, Wondershare MobileGo for Android arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ puku ndị Android igwe na mbadamba. Gaa ndepụta nke na-akwado Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Ina Samsung Galaxy S3 ejikọrọ site Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB
Na Windows mbipute a usoro ihe omume, ị nwere ike họrọ jikọọ gị Samsung Galaxy S3 ka PC site na iji Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB. Ọ bụrụ na ị bu n'obi iji Wi-Fi, na-aga download MobileGo ngwa gị Samsung Galaxy S3 mbụ.
Mgbe a usoro na-achọpụta rụọ Samsung Galaxy S3, Ọ ga-egosipụta ya na isi window.
Cheta na: Mac ọrụ nwere ike jiri eriri USB jikọọ Galaxy S3 na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Nyefee faịlụ ka Samsung Galaxy S3
Na-ekpe sidebar, e nwere ọtụtụ taabụ. Site na ịpị ndị a na taabụ, ị nwere ike nyefee music, videos, photos, kọntaktị, ngwa ọdịnala na SMS.
Bugharịa ngwa Galaxy S3. Download ọtụtụ ngwa ọdịnala na-akpali ngwa online? Na-aga "égwu". Mgbe ahụ, pịa "Wụnye" ịkwaga ọkacha mmasị gị ngwa Galaxy S3.
Import kọntaktị site na Outlook, Windows Live Mail, Windows lebara Book. Na kọntaktị window, pịa "Import / Export"> "Import kọntaktị site na kọmputa." Mgbe ahụ, bubata kọntaktị vCard faịlụ, Windows Address Book, Windows Live Mail, Outlook Express na Outlook 2003/2007/2010/2013.
Nyefee music ka Samsung Galaxy S3. Pịa "Music" na-egosi music window. Site na ịpị "Tinye", i nwere ike na-agagharị na Pc maka music faịlụ. Mgbe ahụ, nyefee ha gị Samsung Galaxy S3. Ọ bụrụ na ndị songs nwere ike na-egwuri na a na ekwentị, programmụ a ga-enyere gị aka tọghata ha n'ime MP3 faịlụ.
Nyefee videos ka Samsung Galaxy S3. Pịa "Videos"> "Tinye". Chọta na ị chọrọ videos na pịa "Open" idetuo ha na ekwentị. Mgbe videos nwere kedi formats, programmụ a ga tọghata ha ka Android enyi na enyi n'anya.
Detuo foto Galaxy S3 na ikpuru-n-dobe. Na foto window, nri pịa ike a nchekwa. Mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe foto site na PC na-Galaxy S3.
Bugharịa SMS ndabere ka Galaxy S3. Pịa "SMS" ikpughe SMS window. Pịa "Import / Export"> "Import SMS site na kọmputa." Chọta SMS ndabere na mbubata ya.
Cheta na: Naanị SMS ndabere na MobileGo for Android nwere ike ịbụ nyefe Galaxy S3.
Dị ka ị na-ahụ, e nwere bụ "Files" taabụ na hapụrụ sidebar. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nyefee faịlụ site na PC na-Galaxy S3 site na iji SD kaadị nchekwa, ị nwere ike pịa "Files". Na faịlụ window, tinye music, videos, ngwa ọdịnala, wdg ka Samsung Galaxy S3.
Gbalịa MobileGo for Android nwere Galaxy S3 kpọfere faịlụ.
Olee otú Detuo Ndi ana-akpo si gam akporo ka PC
Otú nyefee faịlụ site PC ka Nexus 7